Dugsiga Mujaahid Quule Aadan Dool Oo Ka Qayb Qaatay Xuska Maalinta SNM
Saturday April 07, 2018 - 17:42:52 in Latest News by Geele Mr
Hargeysa(HWN) Magaalada Hargeysa Wax aka dhacay Xus ballaadhan Oo Loo sameeyey sannad-guurada 37aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ururka SNM, iyadoo sannad kasta 6-da April guud ahaan Somaliland laga xuso maalinta aasaaska SNM.
Xuska loo sameeyey aasaaska SNM oo ka qabsoontay hutel mansoor ee magaalada Hargeysa waxa ka soo qaybgalay wasiirka arimaha gudaha Somaliland maxamed kaahin axmed , Wasiir ku xigeenka xananada xoolaha yurub abiib cabdi , Wasiirkii Hore maaliyada maxamed xaashi cilmi, madaxda ururka Sooyaal, ardayda dugsiga sare ee mujaahid Quulle Aadan iyo mujaahidiin tiro badan.
Guddoomiyaha Jimciyadda SOOYAAL oo halkaas ka hadlay, ayaa ka sheekeeyey sooyaalkii taariikheed ee SNM isagoo xusay in laga midhodhaliyey fikirkii lagu aasaasay SNM.
Cabdi salaan yaasiin ayaa isaguna geestiisa ku amaanay sida wanaagsan ee ay xafladdan uga soo qayb galeen iskuulka quule Aadan xuska oo lagu xusayo mujaahidiintii SNM Waxaanu tilmaamay in mujaahidka iskuulka loogu magac daray oo kaalin mug leh kaga jiray dagaalkii waddanka Somaliland lagaga saaray kaligii taliskii maxamed siyaad bare.
Cabdisalaan ayaa sheegay in maamulaha iskuulkuna uu isaguna qaaday dhabihii mujaahidka isla markaasina ardayda si ay u dhigtaan kalmadaha ay jeediyeen mujaahidiintu madasha u keenay isaga oo iskuulka quulena ku amaanay firfircoonaanta ka muuqata,
geesta kale waxa uu ka hadlay hormurka uu dalku ku talaabsaday iyo dorashooyinkii dalka ka dhacay oo uu sheegay in ay si nabad ah uga qabsoontay balse dalal badan oo caalamka ka mid ah ayaanay ka dhicin dorashaadan Somaliland ka qabsoontay
Sannad kasta 6-da April, ayaa Somaliland laga xusaa aasaaskii ururka SNM oo sannadkii 1991-kii ku guulaystay inuu dalka ka xoreeyo talliskii Siyaad Barre ee xasuusa foosha xun kula kacay dadweynaha Somaliland.
ugu danbeynti waxa soo gunaanaday munasibada lagu xusay aas- aaska ururka SNM kana sheekeeyey taariikhda SNM iyo marxaladihii kala duwanaa ee ururkaasi soo maray, isagoo xusay mujahidiinti ku nafawayay halganka xornimo doonka aha waxa aanu bogaadin u soo jeediyay dugsiga mujahiid quule aadan oo ku bogaadiyay si hagar laanta ah ee u uga qayb qaadanayo xuska SNM